Sida loo sameeyo playlist ku iPad a
> Resource > iPad > Sida loo sameeyo playlist ku iPad
Anigu ma abuuri karaan playlist cusub iPad, ma ahan in aan badhanka New. Sidee baan u abuuri karaan playlist cusub iPad?
Playlists on iPad ha aad maamuli songs si fiican. Waxaad kala songs la Gurtida kala duwan playlists kala duwan. Waa wax sahlan in la abuuro playlist ku iPad, marka aad leedahay qalab - Wondershare TunesGo (Windows). Dadka isticmaala Mac, waxaad isku dayi kartaa Wondershare TunesGo (Mac) . Qalabkani waxa uu awood aad si ay u sameeyaan iyo edit playlist on iPad fudayd.
Download barnaamijka si ay u abuuraan playlists on iPad.
Fiiro gaar ah: Labada Wondershare TunesGo iyo Wondershare TunesGo (Mac) waxaa laga heli karaa adiga. Dooro mid ka mid ah adiga kugu habboon. In this article, waxaan isku dayi doonaa TunesGo Wondershare. Dadka isticmaala Mac, waxaad qaadi karaan tallaabooyinka ka mid ah.
Tallaabooyinka sahal in la sameeyo playlist ku iPad
Tallaabada 1. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPad in kombiyuutarka
Ka dib markii ay soo degsado qalab this, waa in aad la rakibi iyo waxa maamula on your computer. Isticmaal iPad USB cable in ay ku xidhmaan aad iPad in kombiyuutarka. Your iPad isla markiiba la ogaado doonaa. Ka dib markii in, waxaad heli doontaa suuqa kala aasaasiga ah sida shaashadda hoose ayaa muujinaya.
Fiiro gaar ah: iPad taasoo ay taageereyso TunesGo Wondershare waa iPad isha bandhigay, iPad mini, New iPad ayaa, iPad 2 iyo 1 iPad.
Tallaabada 2. Samee playlist on iPad
Halkan, guji "playlist" khaanadda bidix. Dhammaan playlists ku muujisan yihiin xaq. Si aad playlist cusub, waxaad riixi kartaa "Add". Sii magac. Waxaa fur.
Haddii aad jeceshahay in aad heeso dari ka kombiyuutarka si playlist cusub , waxaad u baahan tahay in guji "Add". Dooro songs in aad go'aansato in aad ku darto. Guji "Open". Heeso Kuwani waxaa lagu dari doonaa playlist cusub.
Maxaa dhacaya haddii aad doonaysid in aad heeso daro in aad iPad in playlist cusub? Tiirka bidix, guji "Media". Guji "Music" inay soo qaadaan suuqa kala music ah. Dooro files music ah. Midig u guji songs kuwaas. In menu jiido-hoos, doortaan "Add to playlist" ka dibna ku dar in playlist cusub.
Ka sokow abuuro playlists on iPad iyo ku daray heeso iyaga, waxaad sameyn kartaa waxyaabo dheeraad ah oo ay si fiican u maamuli playlist ah.
View info oo ku saabsan song in playlist cusub. Dooro song in aad rabto in aad ogaato ay info. Samee click midig. Dooro "Guryaha" Waxaad ka arki kartaa album, artist, xajmiga iyo dheeraad. By gujinaya "Copy in sabuurad", waxaad badbaadin kartaa info gabaygii ee.
Playlists dhoofinta in Lugood iyo computer. Labada playlists caadiga ah iyo playlists smart dhoofin karo maktabadda Lugood iyo in your computer. Gaar ahaan, gabayadii 'info, sida xisaab play, qashanka iyo rating, waxaa sidoo kale lagu dhoofiyo.
Delete playlists caadi on your iPad. Haddii aad qabto playlists badan oo caadi ah in aadan go'aansan in ay mar dambe sii, oo aad iyaga u tirtiri kartaa hal mar.
Isku day TunesGo si ay u sameeyaan playlists on iPad!